Flash Offers - Chete TODAY pane sarudzo yezvigadzirwa - THE INDIAN FACE
Nakidzwa neFlash Offers yedu pane sarudzo yezvigadzirwa zvedu zvevarume nevakadzi panguva nhasi chete. Caps, magirazi, ski goggles, nguva, nezvimwe. Kununurwa mumaawa 24/48.
* Zvipo hazvisi zvekuwedzera kune ekushambadzira makodhi ekudzora
Ventura Nhema / Green
Ventura Nhema / Green 14.95 € 49.95 €
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Bhuruu
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Bhuruu 14.95 € 54.95 €
Oxygen Shanduro Grey / Nhema
Oxygen Shanduro Grey / Nhema 14.95 € 54.95 €
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Chiedza Chitsvuku
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Chiedza Chitsvuku 14.95 € 54.95 €
Ventura Dema / Chiedza Chitsvuku
Ventura Dema / Chiedza Chitsvuku 14.95 € 49.95 €
Ventura Nhema / Bhuruu
Ventura Nhema / Bhuruu 14.95 € 49.95 €
Southcal Green Tortoise 14.95 € 40.00 €
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Tsvuku
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Tsvuku 14.95 € 54.95 €
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Green
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Green 14.95 € 54.95 €
Kailani White chena
Kailani White chena 14.95 € 64.95 €
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Nhema
Oxygen Shanduro Blue Tortoise / Nhema 14.95 € 54.95 €
Noosa Green Tortoise 14.95 € 40.00 €
Nunkui Kamba yeGreen
Nunkui Kamba yeGreen 14.95 € 64.95 €
Kailani Kamba yeGreen
Kailani Kamba yeGreen 14.95 € 64.95 €
Oxygen Shanduro Grey / Chiedza Chitsvuku
Oxygen Shanduro Grey / Chiedza Chitsvuku 14.95 € 54.95 €
Tarifa Bhuruu / Dema
Tarifa Bhuruu / Dema 14.95 € 54.95 €
Oxygen Shanduro Grey / Tsvuku
Oxygen Shanduro Grey / Tsvuku 14.95 € 54.95 €
Oxygen Shanduro Grey / Green
Oxygen Shanduro Grey / Green 14.95 € 54.95 €
Free Spirit Grey / Burgundy
Free Spirit Grey / Burgundy 14.95 € 54.95 €
Tarifa Bhuruu / Nyoro
Tarifa Bhuruu / Nyoro 14.95 € 54.95 €
Ventura Grey / Tsvuku
Ventura Grey / Tsvuku 14.95 € 49.95 €
Southcal Rima Tortoise
Southcal Rima Tortoise 14.95 € 40.00 €
Ventura Brown / Bhuruu
Ventura Brown / Bhuruu 14.95 € 49.95 €
Tarifa Grey / Burgundy
Tarifa Grey / Burgundy 14.95 € 54.95 €
Ventura Tortoise / Tsvuku
Ventura Tortoise / Tsvuku 14.95 € 49.95 €
Tarifa Black / Green
Tarifa Black / Green 14.95 € 54.95 €
Tarifa Grey / Bhuruu
Tarifa Grey / Bhuruu 14.95 € 54.95 €
North Nhema 19.95 € 44.95 €
Born to Wakeboard Grey uye chena
Born to Wakeboard Grey uye chena 12.95 € 40.00 €
Born to Windsurf Bhuruu uye tsvuku
Born to Windsurf Bhuruu uye tsvuku 12.95 € 40.00 €
Born to Skate Grey / Bhuruu
Born to Skate Grey / Bhuruu 14.95 € 40.00 €
Born to Street Ball Muchena / Mutsvuku
Born to Street Ball Muchena / Mutsvuku 14.95 € 40.00 €
Born to Run Nhema / Yero
Born to Run Nhema / Yero 14.95 € 40.00 €
Born to Fly Bhuruu / Dema
Born to Fly Bhuruu / Dema 14.95 € 40.00 €
Born to Roll Muchena / Mutsvuku
Born to Roll Muchena / Mutsvuku 14.95 € 40.00 €
Born to Roll Bhuruu / Chichena
Born to Roll Bhuruu / Chichena 14.95 € 40.00 €
Santa Cruz Bhuruu uye White Cap
Santa Cruz Bhuruu uye White Cap 9.00 € 40.00 €
MAFUASI ANOPA MUITITI YEDU YEPAMUTEMO YEVARUME NEVAKADZI
Iko kukosha kwemari mu The Indian Face
The Indian Face mucherechedzo unonzwa kudaidzwa kwechisikigo uye unotevera ruzha rwechiitiko Isu tiri mweya wakasununguka uye ndihwo hunhu hwedu hwakanyanya kukosha.
Isu tinogadzira zvishongedzo zvakagadzirirwa kukuperekedza iwe mumutambo iwe waunodzidzira uye isu tinoda kuvaita vabatsiri vako mune chese chiitiko chaunorarama. Chinangwa chedu kana tichigovera chigadzirwa chimwe nechimwe ndechekuti chero munhu ane shungu nezve zvemitambo nerusununguko anogona kuzvitenga.
Iwo magadzirirwo atinoita mukati The Indian Face Ivo vane rakanakisa mhando, iro rinoperekedzwa nemutengo mumutsara. Chinangwa chedu ndechekuona kuti zvinhu zvedu zvinoenda kumusika zvakashongedzerwa nehukuru hwekuita hwatakaronga, uye kuti vanosanganawo nezvinodiwa nezvinodiwa nevatengi vedu.
Nhanho inotevera, mushure mekugadzira uye kugadzira chimwe nechimwe chinhu, ndechekutaurirana kuwanikwa kwayo muchitoro chedu chepamhepo. Isu tinozviita kuburikidza nekambani yepamhepo yatakagadzira kuitira kuti vese maIndia Midzimu vazive kuti vanogona kuiwana. Pano mutengi anogona kuwana zvigadzirwa zvemwaka uno uye zvimwe, nezvikorekedzo uye zvikwereti zvinoshandiswa.
Imwe nzvimbo yatinopa kumutengi wedu ndeyekuti isu tine chikamu muchiratidzo chedu uko kwatinoita kupa kwezuva pane zvakawanda zvezvigadzirwa zvedu; Izvi zvinoreva kuti isu tinosarudza zvimwe zvezvigadzirwa zvedu uye, kwemazuva makumi maviri nemana, tinozvisimudzira uye nekushandisa kupihwa kwavari. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti idzi mhando dzekupa dzinongoshanda chete kwemaawa makumi maviri nemana.
Kuti titenge zvigadzirwa zvedu, isu tinowanzo kupa coupon coupon ine kodhi inoonekwa kumusoro kwewebhusaiti. Kana iko kutenga kuchizotengwa, kodhi iyi yekubvisa inopinda usati waita muripo uye kupihwa kunoitwa nekukasira. Zvikwereti zvatinopa dzimwe nguva zvinoiswa kune chimwe chigadzirwa, chine mutengo unoratidzika kunge wakadzikira, uye pane dzimwe nguva isu tinoshandisa kupihwa pachikamu chechipiri chinotengwa nemutengi.
Zvigadzirwa zvekambani, sezvatatotaura, zviri muchikamu chinonzi flash sale, kana mabhenefiti zvinopihwa, uye mutengi anogona kuwana magirazi ezuva, ngowani, magirazi emitambo, magirazi echando nemawachi.
Pakusarudza zvinhu, tinofunga nezvekusarudza zvigadzirwa zvemwaka. Tinoda kuti zvigadzirwa zvinyanye kukwezva kumutengi kuitira kuti, patinovawedzera kune yekutengesa yepamhepo, vatambi vedu vawane chinonakidza uye chinokwezva chipo chavanogona kutora mukana uye kunakidzwa.
Imwe poindi inofarira kugadzira flash inobuda mu de The Indian Face, ndezvekuti isu tinoda kuendesa zvigadzirwa zvedu nenzira inokurumidza uye inoshanda, kuitira kuti, pamusoro pekunge watora mukana wechigadzirwa chemhando yakanaka kwazvo uye pakupihwa, mutengi haafanire kumirira anopfuura maawa makumi maviri nemana kuti agamuchire yavo chigadzirwa. Uye zvakare, kana mutengi akaita kutenga anopfuura makumi matatu emaeuro, kungave kuburikidza neinoburitsa pamhepo kana peji hombe, mari yekutumira haibhadhariswe.
Kugadzira zvigadzirwa zvinotungamirwa kune zvinopihwa uye nemitengo yekugadzirisa, chimwe chishandiso chinonakidza chatinoita kuti chiwanikwe kumutengi uye icho chinobatsira kuramba tichiziva nekuwanika kwezvinyorwa pawebhu, zvigadzirwa zvine zvidzikiso mutirongo kana nhau uye nyowani kuunganidzwa, ipepanhau revhiki nevhiki re The Indian Face, iyo inopa mukana wekunyorera nekuwana iyo webhu.
Tinokurudzira chero munhu anoda zvisikwa, mitambo yekunze uye anobatsira uye fashoni yemhando yepamusoro, kuti atore mukana pane dzese sarudzo dzatinopa, kungave kuburikidza nekambani yedu, makodhi ekuderedzwa, kana kuburikidza needu epamhepo ekutengesa maseru.
En The Indian Face Isu tinopa zvakasiyana siyana zvigadzirwa, zvese zvine chinangwa chekuita yako mitambo mitambo kuti inyatsoita uye kusimudzira chengetedzo yako uchidzidzira.
Kune rimwe divi, tinowana zvivharo zvemitambo, zvigadzirwa zvave kuitika mumwaka ichangopfuura uye zviri kuwedzera kusimbiswa sezvinhu zvemazuva ano uye zvinopa simba kune avo vanozvipfeka. Caps yave kupfekwa gore rese, zvisinei kuti izhizha kana nguva yechando. Izvi ndezve aesthetic zvikonzero uye kuwedzera kuchengetedzeka kuzuva iro, muSpain, rinopenya rinenge zuva rega rega regore. Zvisinei, kana chiri chokwadi kuti muzhizha mashandisirwo aro anowedzera kubvira mwaranzi yezuva ichisvika patiri nesimba rakawanda uye isu tinowonekera zvakanyanya, zvese kune zvazvakanakira nekukanganisa kwayo. Neichi chikonzero, mukati memwedzi yezhizha isu tinopa kutengesa kwakanyanya kutarisana nerudzi urwu rwezvigadzirwa, sezvo tichiziva kuti ndizvo zvakakosha kune vatengi.
Kune rimwe divi, zita redu rine zvakare rakazara rakazara katarogu yemagirazi ezuva. Chinangwa chedu muchikamu chechigadzirwa ichi ndechekugara tichitevedzera zvakakwirira zvehunhu uye mashandiro, sezvo tichiziva kuti kuchengetedzeka kwevamwe kuri mumaoko edu uye tinoda kuona kuti munhu wese anotenga magirazi ezuva kubva The Indian Face, chengetedzwai nguva dzose.
Ichi chishongedzo chavewo chisina nguva uye hachifanirwe kunge chiri chirimo kuchipfekedza, asi isu, pamusoro pekuva nezvipo zvinoramba zviripo mune yedu yekutengesa, yakatangwa, panguva yekutengesa kwezhizha uye nguva yekutengesa yechando, mishandirapamwe yekusimudzira magirazi edu, ku iyo yatinoisa yakakosha mitengo, kuti vatengi vagone kunakirwa nezuva rezhizha pamahombekombe uye zuva rechando pagomo mukuchengetedzeka kwakazara.
Chigadzirwa chinotevera chinogona kuwanikwa mu The Indian Face, uye iyo yatinodada nekupa, ndiyo renji yedu yemasikati magirazi emitambo. Ichi chigadzirwa chigadzirwa chine maficha akakwana uye hunhu hunokwikwidza zvakanakisa pamusika. Zvigadzirwa zvedu zvinoedzwa uye zvinotenderwa, pamwe neakanakisa timu yehunyanzvi iri kutarisira nekugadzira zvinhu, kubhadhara zvakakwana kune zvese, neboka revatambi vevatambi, vamhanyi, vafambi ... avo vanotibatsira kugadzirisa izvozvi.gadzira chigadzirwa chimwe nechimwe. Magirazi egirazi emitambo zvinhu zvinokwezva mukati mawo, asi runako rwawo runotonyanya kuoneka kana koponi yekutapudza yakashandiswa kwavari kana ivo vachionekwa pakati pezvigadzirwa nezvipo zvezuva iri, nekuti mutengo weiyi renji unobatana nekuchengetedzeka kwavanopa uye maficha avanazvo. Kuti utenge magirazi emitambo hazvidiwe kushamisika kuti kutengesa kwatanga rini, nekuti mu The Indian Face Isu tinoedza kuve nechokwadi chekuti pane zvinogara zviripo zvehunhu izvi kune imwe mhando yekodhi yekukoponi inogona kuiswa. Ichokwadi kuti munguva yezhizha uye yechando nguva yekutengesa tinoisa zvakanyanya kukoshesa kusimudzira magirazi emitambo sezvo tichinzwisisa kuti iri mumwaka uno apo mitambo yekudzidzira inowedzera, uye nekudaro, kutengwa kwemidziyo yemitambo.
Chimwe chinhu chakafanana chinoitika nemagirazi echando. Icho chimwe chedu Zvigadzirwa zvePrimiyamu uye zvakagadzirirwa uye zvevatambi, saka vane hunhu hwakasarudzika uye mabhenefiti anodarika zviyero zvemusika. Uye zvakare, isu tinotarisisa zvakanyanya kune dhizaini uye aesthetics yemhando yega yega. Izvo zvigadzirwa zvinounza kudzikama uye kunaka kune mutengi, iwo makuru asi mashoma uye asina kwazvakarerekera mavara anotungamira kuitira kuti agone kuve nyore kusanganiswa nemidziyo yeski. Kunze kwekupa magirazi echando nechando munzvimbo yedu yepamhepo uye munzvimbo dzedu dzekutengesa dzakavanzika, panguva yekutengesa yechando tinowedzera chigadzirwa chedu uye tinovapa mukana wekushandisa makodhi ekuderedzwa.
Pakupedzisira, The Indian Face inopawo huwandu hwemawachi. Izvi zvigadzirwa zvakare zvinechinyakare zvachose, saka zvavanopa hazvigadziriswe kutengeswa kwezhizha kana kwechando, asi asi isu tinoshandisa zvidzikiso pakutengesa kwedu flash nguva nenguva.
Sezvinoonekwa, mu The Indian Face Isu tinofara kuti chero munhu anogona kutenga zvigadzirwa zvedu nemutengo unodhura, uye tinoita zvese zvinobvira kuti izvi zviitike.
ZVIKURU ZVINOPA uye ZVINODZIDZISWA PAMUSORO PAMWE NEZVINOGONESESA VANHU
Sei The Indian Face?
Kana isu tichitaura nezvekunakidzwa, rusununguko, kuongorora uye kuda chinzvimbo, iwe unofunga nezveani? Unonzwa uchizivikanwa namashoko iwayo here? Isu zvikuru. Isu takagara tichitenda kuti pamusoro pekurarama mutambo uye kunzwa kuzadzikiswa patinobva muguta, tinofanirwa kuupfuudza, toita chinooneka chinhu chisingarasike nemazwi.
Anopfuura makore gumi nemashanu apfuura The Indian Face, uye zuva rega rega inokura uye inoenderana nehupenyu nevanhu vanoigadzira. Izvo isu zvatiri pachena ndezvekuti isu tinoda kuti wese mutambi wemitambo anakirwe nemucherechedzo wakaberekerwa iye.
Isu tinofarira zvefashoni uye zvekunze, uye semhedzisiro yezvinhu zviviri izvi, takagadzira mitsetse yemakepisi, magirazi ezuva, magirazi emitambo nemawachi evarume. Isu tinove nechokwadi chekuti chimwe nechimwe chezvigadzirwa mune yega yega muunganidzwa zvine mhando isingakundike uye inogona kukuperekedza pane ako ezviitiko kwemakore. Naizvozvo, isu tinoziva kuti dzimwe nguva mutengo wechigadzirwa che The Indian Face Inogona kuve mari iyo mutengi anga asina. Asi kugadzirisa iri diki bundu, isu takagadzira zvivakwa zvakawanda zvinoita kuti zvive nyore kune chero munhu kuti anzwe kuti mhando yedu haigoneke.
Kune rimwe divi, mukati medu chitoro chepamhepo, isu tine nzira yekubudisira iyo yatinogovanisa nhevedzano yezvigadzirwa zvine akateedzana ezvideredzwa muboka revarume. Kazhinji, kupatsanurwa kwezvinhu zvevarume zviri kupihwa kunoitwa zvichienderana nezvinodiwa ivo kana nguva yegore yatiri.
Kune rimwe divi, pamusoro pekuve nezvipiwa izvi munzvimbo yekutengesera, inovawo mazuva ese, isu tinogadzirawo zuva nezuva makuponi ekudzora ayo atinopa vatengi mukana wekuchengetedza pane chechipiri chinhu chavanotenga. Kuti uwane coupon coupon, pane yedu webhusaiti isu tinoratidza iyo yakaderedzwa kodhi iyo inofanirwa kuiswa panguva yekutenga.
Imwe nzira yatinopa kuti tiwane zvigadzirwa zvevarume pa The Indian Face Nerumwe rudzi rwekubvisa kana kupihwa, kuri kuburikidza nekuwana zvakavanzika zvekutengesa nzira dzatinoshanda nadzo. Ava vanogovera vane zvakawanda zvezvigadzirwa zvevarume vedu zviri kutengeswa kwenguva shoma. Misiyano iripo pakati pekutengesa kwakazvimirira uye kwatinoburitsa ndeyekuti, mune yekutanga kutaurwa, zvinotakura zvinotora mazuva akati wandei kugadzirwa uye zvigadzirwa, kunyangwe zviine zvidzikisira zvinoyevedza, hazviwanzo kuve zvemwaka. Mukupesana, zvinhu zviri kutengeswa zvinotengwa kuburikidza nekambani ye The Indian FaceIvo vanotora zuva kuendeswa kumba kwako uye vanogara vari mumwaka.
Ndezvipi zvigadzirwa kubva The Indian Face une kukwidziridzwa?
The Indian Face Inoedza kuisa zvidzikisira kune ese mapoka ezvigadzirwa zvevarume zvainazvo kuitira kuti ifarire kuwanikwa kwezvinyorwa zvese zvakaenzana, ichigara iine kukosha kwemari.
Pakati pezvinhu zviri pabhodhi rezvigadzirwa zvemhando yedu uye zvinonakidzwa nezvipo zvezuva nezuva, tinowana:
Caps ndeimwe yeazvino uye mufashoni zvishongedzo zvegore. Vatambi vanozvishandisa mukushanda kwavo kwekunze nekuda kwekudzivirirwa kubva kuzuva ravanopa, asi vakavewo chinhu chekushandisa kwemazuva ese. Mhando dzakasiyana murudzi urwu rwechigadzirwa dzakakosha, saka zvinonakidza kutarisa nguva nenguva pakutengesa kwemakapu evarume.
En The Indian Face isu tiri padanho nemaitiro uye tisina kumbobvira tarasikirwa nehunhu hwedu, isu tinofemerwa nezvakapfekedzwa, zvichibva pachokwadi chekuti hwaro hwezvigadzirwa zvedu hwakafemerwa ne baseball uye malori macap. Isu tinomiririra nyika yemitambo, saka nguwani dzedu zvakare chiratidzo chehupenyu hwekushanda nemitambo. Isu tinokurudzira kutora mukana wemaponi ekudzikisa atinogadzira zuva nezuva kuti tikwanise kuwana inopfuura one cap pakutenga kwega kwega, pamutengo weimwe.
Magirazi ezuva akawana mukurumbira wakawanda mumakore achangopfuura uye ave anokosha anokosha pakati pechirume chikamu chinonaka uye chinodzivirira. Kuziva nezve kukosha kwemagirazi ezuva sekudzivirirwa kwehutano hwedu hwekuona kwakura zvakanyanya, pamwe nekudikanwa kwekuti vave vehunhu hwakanaka uye vanonyatso chengetedza. Vhura The Indian Face Isu tinodada nekugona kusimbisa kuti zvigadzirwa zvedu zvinoteera zvese zvazvino zvehutsanana uye zvinopfuura muhunhu nekuita vazhinji vevakwikwidzi vedu mumusika, uye hatidi kuti chero munhu asare asina kukwanisa kuzvitakura. Ndokusaka tichikurudzira zvakasimba vatengi kuti vawane zvatinopihwa zvezuva iri, kutora mukana wemaponi edu ekudzikisira, uye kushanyira nzira dzekutengesa dzakazvimirira, kwavanozowanawo mukana wekutenga magirazi pamutengo unodhura.
Chero ani zvake anozviona semumhanyi akanaka anofanirwa kuziva kukosha kwemagirazi emitambo uye ,zve, kuva nedare rimwe chete muchikwata chake. Muchiratidzo chedu isu tinopa kukosha chaiko kumagirazi emitambo, nekuti iwo akaenzana nebhasikoro kana ngowani yeski, asi pachinzvimbo chekudzivirira musoro wedu, anodzivirira maziso edu.
En The Indian Face Tine rombo rakanaka kuve neakanakisa timu yehunyanzvi, pamwe nechikwata chemitambo chinoshanda pamwe mukuvandudza uye kugadzirwa kwemagirazi ega ega. Isu tinodada nebasa ratinoita mazuva ese kuti tikwanise kupa zvigadzirwa zvinonyatsoita izvo zvisingawanikwe pane imwe nzvimbo yekutengesa. Isu tinotenda zvakasimba kuti kuwana mapaundi evarume magirazi emitambo uri kutengeswa ndiwo mukana usingafanirwe kupotsa, nekuti mutengo weizvi, kana kupihwa kwezuva kwaiswa, unokwikwidza zvakanyanya uye unokwezva.
Mawachi mubatsiri usingazombofa wakabuda musitaera. Munhu akapfeka wachi pachiuno chake kubvira kubvira nyika yave nyika uye zvakanyanya sehunyanzvi uye digitization kumberi, izvi zvicharamba zvakadaro. Uye isu tiri kufara kwazvo. Sezvo chiri chishandiso chisina chisingagumi, unogona kuwana kupenya kwevarume vedu chero nguva uye kutenga dial uye tambo inokodzera zvakanyanya hunhu uye zvinonaka zveumwe neumwe.
Kune rimwe divi, kupa mawachi kwagara kuri kwakajairika uye yakasarudzika tsika, saka funga nezvababa vako, shamwari kana mukoma uye shandisa mari yekubvisa iyo yatinopa zuva nezuva, mavari.
Ndepapi kuri kukwidziridzwa mu The Indian Face?
En The Indian Face kune kukwidziridzwa nguva dzose. Hatigone kuseta zuva rekutaura kuti kutengesa kwevarume kunotanga rini nekuti, chaizvo, mune yedu yekutengesa yepamhepo unogona kuwana kutengesa, kupihwa kwezuva nezuva uye makodhi ekuderedzwa aunogona kunyorera chero zuva regore, zvisinei nemwaka.
Nekudaro, isu tinowedzera kuwedzera kuvepo kwekusimudzira uye makodhi ekuderedzwa pane zvimwe zvigadzirwa panguva yekutengesa kwezhizha uye nguva yekutengesa yechando.
Kana zhizha rasvika, uye naro, iyo nguva yekutengesa kwezhizha, tinosimbisa kuita kuti zvionekwe zvivharo zvedu, magirazi edu ezuva uye magirazi emitambo akagadzirirwa kudzidzira mitambo mumakomo uye kunyangwe mumvura, nekuti, mukati memwedzi iyi, zuva rakanyanya zvehasha uye zvimwe zvekunze zviitiko zvinoitwa.
Kune rimwe divi, panguva yechando, uye kunyanya muna Ndira, apo kutengesa kwechando kuchitanga uye mwaka weski uri panzvimbo yayo yepamusoro, isu tinonyanya kufunga nezvekusimudzira magirazi echando uye echando.
ZVIPO NEZVANODZIDZISWA PANE ZVEMAITI EVAKADZI
Ndedzipi nzira dzekutenga dzinogona kuteverwa mukati The Indian Face?
The Indian Face yakagadzirirwa kupa vese vatambi zvigadzirwa zvakagadziriswa zvizere uye zvakagadzirirwa kuzadzisa zvido zvavo. Isu tinosangana pamwe nevakadzi vese vanogara vachipukunyuka kubva pane zvakajairwa uye tinowana kwavanowana kurudziro mumakomo, mukufamba kwemasaisai kana mukunzwika kwemhepo kuburikidza nemiti.
Isu tinogadzira zvigadzirwa zvinoratidzira hunhu hwehupenyu nemavara avo uye dhizaini, uye nekuvadzivirira, kuva mubatsiri wavo mukuru panguva yemitambo. Pamusoro pekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine hunyanzvi hwekuita, kubva kuchikwata che The Indian Face Tinoda vese vafambi vanoshuvira kuisa zvigadzirwa zvedu muwardrobe yavo kuti zvikwanise. Isu tinopa akasiyana maitiro ekutenga kuburikidza ayo zvigadzirwa zvedu zvinogona kutengwa. Chekutanga pane zvese, kuburikidza newebsite ye The Indian Face, uko zvigadzirwa nemitengo yavo yakagadziridzwa inowanikwa kune iyo isina mhando yekupihwa kana shanduko yakashandiswa.
Kune rimwe divi, isu takagadzira online kuburitsa kwevakadzi ine chikamu chinonzi flash kutengeswa kwevakadzi, matinounganidza zvimwe zvinhu zvatinosarudza zuva rega rega uye kwatinoshandisa akateedzana ezvibodzwa zvinogara kwezuva rimwe.
Uye zvakare, isu zvakare tinogadzira ezuva nezuva ekudzora makuponi ayo akatarisana nekutengwa kwezvinhu zvevakadzi zvinoiswa panguva yekutenga kwechigadzirwa. Iyo coupon inogona kuwanikwa pawebhusaiti ye The Indian Face uye iyo yekubvisa kodhi yekupinda inoratidzwa kumusoro kwechidzitiro.
Vakadzi vanodzora makuponi havaunganidzi uye vanounzwa nenzira dzakasiyana; pane dzimwe nguva vanoderedza mutengo wechigadzirwa chimwe nechimwe, uye pane vamwe, vanopa mutero pachinhu chechipiri chevakadzi chakatengwa.
Zvinokurudzirwa kuti utarise kune urwu rudzi rwekutengesa kwevakadzi, nekuti, kunyangwe zvichiramba zviripo pawebhu, zvinopihwa zvezuva racho, ndiko kuti, chigadzirwa chevakadzi chiri kutengeswa rimwe zuva, zuva rinotevera rinogona kunge risiri.
Imwe nzira yekutenga yedu Midzimu yeIndia inogona kunakidzwa nemipiro yevakadzi pane zvigadzirwa zvedu ndeyekuwana zvakavanzika zvekutengesa masasi evakadzi kwatinopawo zvinhu nemitengo yakaderedzwa uye kwenguva yakati rebei.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvese mune yedu yekutengesa evakadzi, pamwe neyakavanzika yekutengesa nzira dzevakadzi dzatinadzo, izvo zvinhu zvatinopa ndezvemwaka, uye tisati tazviwedzera kune yepamhepo nzvimbo, tinoita chiitiko chekuratidzira, sezvo isu edza izvo zvinonyanya kukwezva kumutengi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, pane dzimwe nguva, evakadzi zvakavanzika nzira dzekutengesa dzinopa zvigadzirwa kubva kune mamwe mwaka, mune yakanakira mamiriro uye ine yakasimba dhepfenyuro.
Kuita kutenga kwakanangana nekupihwa kwevakadzi uye kukwidziridzwa kwemutengo, chimwe chishandiso chinonyanya kukosha chinogona kushandiswa kuramba chichienderana nekuwanika kwezvinyorwa pawebhu, zvakaderedzwa zvigadzirwa zvevakadzi kana nhau uye kuunganidzwa kutsva, ndiyo tsamba ye The Indian Face, kwaunogona kunyorera nekuwana iyo webhu.
Rangarira izvo zvakatumirwa uye kuendesa zvigadzirwa kubva The Indian Face Izvo zvinogadzirwa mukati memaawa makumi maviri nemasere zvisinei nekiyi nzira yekutenga inoshandiswa kutenga chinhu (kuburikidza nekambani yevakadzi kana kuburikidza neiyo peji hombe, pasina kuisa mutero kuchigadzirwa). Kana zvinhu zvikatengwa kuburikidza nevakadzi vakavanzika nzira dzekutengesa, iyo nguva inofungidzirwa yekutakura uye kuendesa yakareba.
Kubva The Indian Face Tinokurudzira vakadzi vese vane ruzivo kuti vatore mukana weiyo zvinopihwa nevakadzi iyo yatinopa zuva nezuva uye kuti iwe unogona kuwana mune yedu yekutengesa yepamhepo yevakadzi. Kunakidzwa nemhando yepamusoro zvigadzirwa nemutengo unodhura zvinogoneka. The Indian Face zvinoita kuti zvikwanisike mazuva ese uye akazviita basa rake.
Ndezvipi zvigadzirwa zvatinoona mune inoburitsa vakadzi ve The Indian Face?
The Indian Face iyo mhando yakawanda kwazvo. Tine mhando dzakasiyana kwazvo dzezvigadzirwa zvevakadzi, uye isu tinoshandisa zvidzoreso kune ruzhinji. Tinopa magirazi ezuva, ngowani dzemitambo, magirazi emitambo nemawachi kune avo vese vakadzi vanoda kuzvishongedza nazvo. Izvo zvigadzirwa zvine imwe shanduko mumutengo wazvo zviri mune yedu yekutengesa yevakadzi, pane yedu webhusaiti.
Nyika yemitambo yakachinja zvakanyanya kubva payakatangwa, isati yangoitirwa kuitirwa vatambi vechirume, asi yanga ichifambira mberi, ichigadzirisa uye ichikura pamwe nevemagariro, izvozvi kusanganisira vangangoita zana muzana vakadzi. Vakadzi vagara vakabatikana zvakanyanya munyika yefashoni uye dhizaini kupfuura mumitambo, uye ikozvino ivo vanogona kusanganisa zvese uye kugadzira magadzirirwo avanogona kushandisa muhupenyu hwavo hwezuva nezuva semutambi. Vhura The Indian Face Tine timu ine simba kwazvo yemitambo yevakadzi, iyo inotibatsira kugadzira nekuvandudza magirazi emitambo.
Kunyangwe izvo zvigadzirwa zvakapihwa neakakwira kwazvo mashandiro uye zvakagadzirwa neyakaenzana nhanho yekuita, tinoda kuona kuti vatambi vedu vese vanogona kuzvitenga, kungave kuburikidza nekuenderera kwedu kwekutengesa kwevakadzi, kana nekuwana iwo masherufu ekutengesa masasi emukadzi.
Chikwata che The Indian Face Iyo inoumbwa nevatambi vanoda kubatsira nekushongedza vamwe, saka chinangwa chedu ndechekupa zvechokwadi mhando uye zvakachengeteka zvigadzirwa. Isu tinoziva kuti kudyara kunogona kuve kwakakwirira, asi zvakare kuti zvakakosha kuti uzvishongedze nemhando dzakanaka magirazi emitambo, sezvo ivo vari ivo vari mukutarisira kwekuchengeta maziso edu uye chiratidzo chedu chakachengetedzwa panguva yemitambo, nekudaro, isu takagonesa nzvimbo yekutengesa ye vakadzi mune zvigadzirwa zvedu nguva dzose.
Kune rimwe divi, isu tinotenda kuti kutora mukana wekupihwa kwevakadzi mumitambo magirazi kunogona kubatsira kugadzira yakanaka wardrobe. Kutamba mitambo uye kunzwa wakasununguka nechitarisiko chaunopfeka chakakoshawo kuzviremekedza uye kukurudzira. Magirazi akakodzera vese vakadzi nevarume saka, pamusoro pekutora mukana pane zvinopihwa pane zvigadzirwa zvevakadzi, zvinofanirwa kutariswa kuti vachashanda zvakangofanana pachiso chechirume.
Vakadzi vezvemitambo vane zvivharo zvemitambo
Iwe unoziva here kuti makapeti ndeimwe yezvazvino uye zvemhando yepamusoro zvishongedzo zvegore? Caps ave nguo isingarasikirwe mune chero wardrobe uye The Indian Face ndiye mumwe wevakuru vanotarisira kuvapa. Tine sarudzo inosiyana zuva rega rega asi isina zuva rekupedzisira rekuwana kupihwa kwezuva pazvivharo zvevakadzi uye zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekambani yedu yepamhepo yevakadzi.
Rangarira kuti kune akawanda marudzi emakepesi zvinoenderana nezviitwa zvinoitwa zuva nezuva. Vhura The Indian Face, isu takafemerwa nekugadzirwa kwemarori macaps, mesh uye ine logo kumberi, kumiririra nyika yemitambo, uye ivo vakagadzirwa neyakanaka dhizaini uye kusanganisa kwemavara. Isu tese tinoda kunzwa tichizivikanwa nezvatinoita uye nekuudza nyika izvo zvatinofarira uye nekwatiri, uye hatidi kuti chero munhu asarwe asina mukana wekuita, ndosaka tichikurudzira vese vasingaenderane uye vane ruzivo. vakadzi kutora mukana wega wega wekupa mumakapu evakadzi uye kushandisa edu ezuva nezuva ekushambadza maponi, kuitira kuti, pamusoro pekuzvitorera kapu iwe pachako, unogona kupa imwe kuna amai vako, mwanasikana wako, shamwari kana chero mweya wakasununguka waunopa. funga uchazvifarira.
Watches mumawoko evakadzi
Kana mawatch anosunungurwa kubva pakuva chikamu chevashambadzi vevakadzi mukati The Indian Face. Mawachi zvigadzirwa zvisingagumi izvo zvinogona kupfekwa mune chero mamiriro. Ivo vanobatsira zvese muhupenyu hweguta uye nemitambo. Izvi zvishongedzo zvinowanikwawo mumadzimai ekutengesa mwenje makwara atinawo.
Magirazi ezuva ave ari nyeredzi chishongedzo chevose kwemwaka mishoma. Gore rega rega rakasarudzika chimiro, ruvara kana saizi inopfekwa, zvakasiyana negore rapfuura. Uye zvakare, inonyatso kuzivikanwa nevose kuti pamusoro pekutipa maitiro uye hunhu, vanotipa dziviriro, vanotivimbisa kuchengetedzeka uye hutano hwakanaka hwemaziso. The Indian Face inopa zvese; aesthetics uye mhando. Pamusoro pekupa iwo mukana wekuwana akati wandei pamitengo inodhura kwazvo. Nekushandisa kodhi yemutengo iyo isu tinogadzira ingangoita zuva nezuva uye iyo inowanzo bata zvese zvikamu zvezvigadzirwa zvatinopa, isu tinofarira mukana wekutenga maviri maviri magirazi pamutengo weimwe.
Mwaka inoshanda sei mukati The Indian Face?
The Indian Face Iyo haina kugovera ayo ekutengesa nguva mukutengesa kwezhizha uye kutengesa kwechando, isu hatiteedzere block system asi isu tiri kuvhura kukwidziridzwa uye kuderedzwa kodhi chero nguva yegore kana mwedzi, saka haufanire kushamisika zvakanyanya pavanotanga. Kutengesa kwevakadzi, kana zvisiri, zvirinani, kuti ungavashandisa sei. Ichokwadi kuti munguva yezhizha uye yechando nguva yekutengesa zvimwe zvigadzirwa zvinokurudzirwa kupfuura zvimwe, zvinoenderana nemamiriro ekunze kana mutambo uyo unoitwa kazhinji nguva yega yega yegore.
Magirazi egirazi emitambo, semuenzaniso, zvigadzirwa zvisingagumi, kutenga kwavo kunobatsira mukati megore rose, uye kune kukwidziridzwa mumwedzi wega wega, asi mukati memwedzi yezhizha nemuchando, tinowedzera mishandirapamwe, zvinogona kunzwisiswa sekuti tinogadzira wechipiri. kutengeswa pazvinhu zvevakadzi izvi.
Ski uye snowboard goggles uye masiki, kune kwavo chikamu, zvakanyanya mwaka zvigadzirwa. Ivo anoshandiswa kunyanya munguva yechando, uye kunyangwe ivo vachifarira kukwidziridzwa gore rese, iri panguva yekutengesa nguva yechando apo patinoita kuti zvidzikiso uye mabhesiti ezvigadzirwa izvi awedzere. Panyaya yemakepisi, anova mukwanisi anopfekwa zvakanyanya munguva dzezhizha dzegore, isu tinoshandisa iwo ma mechanics akafanana nemumagirazi echando, asi neashure. Isu tinotora mukana wenguva dzekutengesa kwezhizha kusimudzira huvepo hwavo uye kuita kuti vawane.
Kunyangwe hazvo zvipo zvedu zvichiramba zvichienderera, zvigadzirwa zvedu zvinowirirana nguva nenguva uye maponi ekudzikisa atinogadzira, zvakare, saka tinokukoka kuti unyore kuNewsletter yedu, nekuti iwe uchagamuchira ruzivo rwakagadziridzwa pamusoro pekuwanikwa kwezvigadzirwa, zvinopihwa mudura redu, kana kana chaizvo kutengesa kwacho kwatanga, kwechipiri kutengesa ...